Fampiharana: Fitaovana fanampiana voalohany ity fna ny ankamaroan'ny fampiasana isan'andro na niainany, anisan'izany ny: trano, birao, filasiana, fiara, trano fisakafoanana, fiara fitateram-bahoaka, lakana, sambo, lalana, toeram-piasana ary sekoly etc.
Ny kitapo vonjy taitra dia hanome anao vahaolana amin'ireo tsy ampoizina isan'andro tsy ampoizina ary eny an-kianjan'ny ady aza dia misy ny trauma trauma, izay misy: fitsangatsanganana an-dranomasina mandritra ny iray volana, lozam-pifamoivoizana kely ary tsy fahombiazan'ny zaza isan'andro. Tehirizo ao anaty kitapo, kitapo fonon-tànana na kabinetra ara-pahasalamana ity kit ity ho an'ny vahaolana haingana sy mora amin'ny toe-javatra maika.
Ny kitapo fanampiana voalohany dia namboarina tamin'ny habeny mahafatifaty, 10x3x13cm, mora be raisina sy entina amin'ny fampiasana anatiny sy ivelany. Ny mpizarazara anatiny dia afaka mitazona zavatra ilaina mafy sy milamina amin'ny toe-javatra tsy ampoizina.
Ity boaty sarontava ity dia ampy hitana saron-tava vitsivitsy ihany, nefa aza apetraka miaraka amin'ilay sarontava tarehy vaovao ity sarontava ity, mba tsy handotoana.
Ny kitapo vonjy taitra dia hanome anao vahaolana ho an'ny tsy fahita isan-karazany tsy ampoizina isan'andro ary na dia ny toe-javatra misy trauma any an-tsaha aza, izay misy: ny dia an-dranomasina lava, ny lozam-pifamoivoizana kely ary ny zazakely isan'andro
Previous: Vata fitahirizana sarontava